Muran midab salka ku haya oo ka dhacay xeeb ku taal Cape Town kaddib markii ‘xeebtaas laga saaray dadkii madowga ahaa ee booqanayay’ - BBC News Somali
Muran midab salka ku haya oo ka dhacay xeeb ku taal Cape Town kaddib markii ‘xeebtaas laga saaray dadkii madowga ahaa ee booqanayay’
30 Disembar 2018
Dad u ololeeya xuquuqda ayaa sheegaya dadka madowga ah ee booqanayay xeebta ay askar halkaa joogtay ka dalbadeen inay goobta isaga tagaan
Dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan ee magaalada Cape Town kaddib markii ilaalada shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqeysa lagu eedeeyay inay dadka madowga ah amreen inay goobta isaga tagaan.
Ilaalada oo ay soo kiraysteen dad halkaa deggan ayaa la sheegay inay dalxiisayaasha galinkii dambe ee Axaddii la soo dhaafay ka kaxeeyeen xeebta Clifton 4th.
Dibadbaxayaasha ayaa sheegaya in dadka madowga ah ee xeebta tagayay loo beegsaday si aan cadaalad ahayn, hasayeeshee shirkadda ayaa diiday inay xeebta xirtay waxaana ay sheegtay in ay dambiga ka ilaaliso dadka deegaankaasi.
Xeebaha iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan ayaa dadka u kala soocnaa xilligii midab kala sooca.
Mandela iyo midab takoorkii Koonfur Afrika oo maxkamad isla aadaya
Saddex caddaan ah oo 'isir nacayb' loogu dilay Maraykanka
Madaxweynaha Koonfur Afrika oo loo diiday inuu ka qayb galo aaska Ahmed Kathrada
Maayirka magaalada Cape Town Dan Plato ayaa sheegay in shirkadda ammaanka ka shaqeysa "aanay awood u lahayn inay dadka ku amarto inay isaga tagaan xeebta Clifton".
"Ma aynu u ogolaan doonno shirkadaha gaarka loo leeyahay inay xaddidaan galaangalnka goobaha ay dadku isugu yimaadaan," waxa uu sidaasi ku sheegay bayaan uu soo saaray.
Kuxigeenka wasiirka booliska Bongani Mkongi ayaa waxa uu wacad ku maray "inay tallaabo adag ka qaadi doonaan shirkaddaas ammaanka ka shaqeysa".
"Xeebtu waa hantida qaranka, waa hantida dadka sidaas daraadeedna uma baahnin in halkaas ay joogaa shirkado ammaanka ka shaqeeya," ayuu yiri.
Maayir Plato ayaa sheegay in ilaaladu "ay dadka oo dhan ka dalbadeen inay meesha isaga tagaan" oo si gaar ah uma aanay bartilmaameedsan dadka madowga ah.
Kooxaha u dooda xuquuqda xoolaha ayaa waxa ay isku dhaceen dibadbaxayaasha kuwaas oo xeebta ku qalay neef ido ah
Dibadbaxayaasha oo galabkii Jimcaha isugu soo baxay xeebta ayaa muran ka keenay hadalka ka soo yeeray shirkadda ammaanka ka shaqeysa.
"Shirkadahan gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya ammaanka… ayaa dhab ahaantii loo sheegay in aanay xeebta u ogolaan dadka madowga ah ee u muuqda inay darafka magaalada ka yimaadeen," Chumani Maxwele oo ah qof aaggaas deggan oo xuquuqda u ololeeya ayaa sidaasi u sheegay barta internetka ee News 24.
Mr Maxwele, kaas oo bilaabay cabasho baraha bulshada ay ku wada xiriirto oo hal ku dheg looga dhigay #ReclaimClifton, ayaa goobjoog ka ahaa neef ido ah oo meesha lagu gowracay arrintaas oo ay dibadbaxayaasha ku sheegeen inay ku doonayaan inay xeebta uga nadiifiyaan midab kala sooca.
Koox aan badnayn oo u doodda xuquuqda xoolaha ayaa arrintaasi ka hor timid.
Alwyn Landman, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda ammaanka ka shaqeysa ee PPA, kaas oo sheegay in shaqadoodu ay tahay inay dadka aaggaasi ka ilaaliyaan falal dambiyeedka, ayaa diiday in shirkaddu ay xeebta xirtay.
Waxa uu u sheegay News 24 in boolisku uu aaggaasi banneeyay kaddib markii dambi halkaas lagu galay.
"Qalalaase ayaa goobta ka dhacay booliskuna shaqo wanaagsan oo uu ku xakamaynayo xaaladda ayuu qabtay," ayuu yiri.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, booliska ayaa sheegay in aanay helin wax war ah oo tilmaamaya in falal dambi ay galabkii Axadda ka dhaceen xeebtaasi.
"Hadalada xanafta leh ee ay ku raran yihiin hanjabaadaha, waxay dhiiragelin u yihiin ururada argagixisada"
33 Daqiiqadood ka hor
Dastuurka Soomaaliya miyuu kasoo hor jeedaa muddo kordhinta loo sameeyay dowladda?
14 Abriil 2021
Madaxda Soomaalida ma lagu khasbi doonaa inay ku laabtaan teendhada afisyooni?
Kenya oo Soomaaliya kaga hormartay dhoofinta dhuxusha
NATO ma awooddaa in weeerarka Ruushka ay ka difaacdo Ukraine?
Mareykanka oo cadeeyay mowqifkiisa mudda kordhinta loo sameeyay madaxwayne Farmaajo